Hiran State - News: Wararkii ugu danbeeyey arimaha siyaasada Somaliya
Wararkii ugu danbeeyey arimaha siyaasada Somaliya
HS:-M/weynaha rasmigaa ee Somaliya Amb Mahiga oo faragelin ku sameynaya go,aankii ay xilka kaka qaadeen mudanayaasha gudoomiyahii hore ee baarlamaanka xildhibaan Shariif Hasan Shiikh Aaden.
Waxaa magaalada Mogdisho safar ku imaanaya hogaamiyaha Somaliya Amb Mahiga oo qaadan waayey in xilkii laga qaaday saaxiibkiis Shariif Hasan iyadoo aysan soo wargelin mudanayaasha baarlamaanka go,aanka arintaasi maadama uu dalka iyo dadka Somaliyeed siduu doono ka yeelo.
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in Mahiga si deg deg ah ku gaari doono Mogdisho isagoo ujeedadiisu tahay hadii Shariif Hasan meesha ka baxo inuusan heleynin sir badan oo uu hada ka helo dalka iyo dadka Somaliyeed. Mahiga ayaa qorsheynaya hadii ay diidaan Talooyin uu u soo jeedin doono Shiikh Shariif iyo C/wali Gaas inuu marsiin doono wadadii uu marsiiyey Farmaajo.
Dhawaantaan ayey aheyd markii dowlado waaweyn ku canaanteen QM iney dhibaatada Somaliya ka jirta ay qeyb ka yahiin marka la eego xaqiiqada ka jirta dalka iyo warbixinada ay ka keenaan Somaliya shaqsiyaad laga xusay Mahiga, taasi oo aaqirkii keentay inuu booqasho ku tago Somaliya madaxa ugu sareeya QM.
Inkasta oo aan marnaba la xushmeyn rabitaanka shacabka Somaliyeed hadey yahiin mudanayaal baarlaman amaba haweenka jidadka magaalada Mogdisho ku iibiya Shaaha hadane siweyn ayey bulshada Somaliyeed u soo dhaweyeen xil ka qaadistii lagu sameeyey gudoomiyahii hore ee baarlamaanka xildhibaan Shariif Hasan.
Qorshahaha uu doonayo Shariif Hassan.
Shariif Hasan ayaa soo gabo gabeeyey safarkiisii isagoo doonayo inuu si toos ah u aado magaalada Garoowe kadibna halkaas ugu yeero mudanayaasha isaga taageersan si halkaas loogu dhimo tirada baarlamanka oo la qorsheynayo iney noqon doonaan 275 intooda badana uu gacantiisa ku qortay Shariifka hada xilka laga qaaday marka uu furmo shirka Garoowe oo laga yaabo inuu u dhaco bisha 1aad ee sanadka cusub, walow Mahiga, Shariif Hasan iyo mamulka Puntland doonayaan inuu dhaco shirkaas 25 December iyagoo arintaas geed dheer iyo mid gaabanba u fuulaya.
Mustaqbalka baarlamaanka Somaliya.
Wax badan qaar ka mid ah bulshada waxey dhihi jireen Somaliya ma ahan dal xor ah, walow qaar kale oo riyo kunool ah u heystaan in dalku xor yahay waxey waxkasta kala cadaan doonan sida Mahiga lugta ugu dhufto go,aankii mudanayaashu ka gaareen Shariif Hasan sax iyo qaladba dalka iyagaa leh hadane Mahiga ayaa taalada ugu danbeysa lahaan doona ayey leeyahin inta badan shacabka Mogdisho oo aanu siyaabo kala duwan ula xariirnay. laakinse marka xaalka dhinaca kale laga eego ma ahan sidii hore waayo Mahiga xitaa waxuu hada dareensan yahay ineysan run aheyn warbixino badan oo kaka yimid dhinaca Shariif Hasan marka la eego tirada badan ee mudanayaasha ka tirsan ee ka soo horjeeda amaba xilka ka qaaday Shariifka.
Umada Somaliyeed maxey ka aaminsan yahiin mudanayaasha baarlamaanka ma yahiin kuwo leysku laheyn karo?.
Mudanayaasha baarlamaanka maadama aysan shacabku soo dooran amaba si kale hadaan u dhigno aan laga soo dooran deeganada ay ka soo jeedaan wey yar tahay sidey u kasban karaan amaba ficiladooda loogu qaadan karo mid run ah, waayo marka laga hadlayo hab dhaqanka baarlamaanka Somaliya waxaa loo kala qaadaa 4 kooxood.
1- koox fulisa danaha shisheeyaha oo go,aankasta oo ay gaaran aan leysku haleyn karin.
2- Koox dantooda ku ilaashada kana raadsada masaruufka caruurtooda oo iyagoo ilaalinaya nolosha qoyskooda hadba laga saxiixo mashruucii markaasi socda si ay uga helaan dhaqaalo ay ku maareeyaan nolosha caruurtooda dal iyo dad kalena dan kama lahan waxaa u muuqda hadba baahida markaasi heysa qoyskooda dana kama leh wadanka hadii ay meelkasta ka soo galaan ciidamo shisheeye.
3-Koox aad ugu xiran ururka Shabaab iyo Alqacida una badan kuwa ku fikirka ah Shiikh Shariif kuwaasi oo hada siweyn uga qeyb qaatay xil ka qaadistii Shariif Hasan madaama ay iyagu dooneyn in aysan bulshada Somaliyeed helin wax nidaam ah ilaa ay wadanka la wareegaan kooxaha xag jirka ah ee dalka iyo dadkaba biday dhibta maanta taagan.
4-Koox tiro yar ah oo aruuriya dhacdooyinka ka dhax dhaca barlamaanka si waxkasta loogu helo raad raac mustaqbalka kuwaasi oo aan inta badan la dareemin kuna dhax jira mudanayaasha oo kaftama, qosla laakinse sidey wax u socdaan iyo sirar badan oo aysan bulshada ogeyn aruuriya inkasta oo aan la ogeyn iney mustaqbalka bulshada u soo bandhigi doonaan iyo in kale.sidaasi daraadeed mudanayaasha maanta jira ma ahan kuwo leysku haleyn karo oo dalka iyo dadka Somaliyeed bad baadin kara marka waa uun isha ka fiirso waxii ay sameeyane ka qor waxii aysan sameyna ka aamus maadaama ay meesh aka baxday wadaniyadii dalka lagu difaaci lahaa.
Ugu danbeyn marka xaalada hada taagan la eego Shariif Hasan waxuu ka mid yahay shaqsiyaadka la haray qaranimada umada Somaliyeed walow uu iskaka jiro riwaayad aan la ogeyn sidey ku rumoobeyso hadane waxuu u muuqdaa shaqsi ka tagaya siyaasada isagoo dhaleeceysan. dhacdooyinka lagu saxuusan doono Shariif Hasan haduu sidan ku baxo waxaa ka mid ah inuu kala dooran jiray jagadii uu doono iyadoo la xasuusto mar uu ahaa wasiirka maaliyada inuu Shiikh Aden Madoobe ka soo wacay Yurub kuna yiri waa in aad baneysaa xilka gudoomiyanimada isagoo sii sheeganaya maalinta uu doonayo inuu xilkaas ku wareego. waxey warar aan la hubin shegaan in mararka qaarkood uu u sii sheego qaar ka mid ah xaasaskiisa hadba hogaamiyaasha uu shaqadooda ka ceyrinayo hadey noqon laheyd Madaxweyne, R/wasaare, wasiir ilaa Agaasimo dowladeed.
Hadaba wararkii ugu danbeyey ee uu ugu sheegeyey beelaha Digil iyo Mirfle ka hor intii aan xilka gudoomiyenimo laga qaadin waxaa ka mid ah in ay gacantiisa ku jirto jagadii madaxweynanimada Somaliya uuna ka keenay Hawiye iyo Daarood.....
La soco wararkeena danbe iyosiyaasada Somaliya ee aan laheyn jid loo raaco.
· admin on December 15 2011 12:04:34 · 0 Comments · 2172 Reads ·
14,569,515 unique visits